ဒီနှစ် Chinese New Year ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။ လကုန်တော့ ရောက်ဖြစ်ဖို့ မသေချာဘူး။ ဒီနှစ်က နွားနှစ်ဆိုတော့ နွားလိုရုန်းရဦးမယ်လေ။ တတ်နိုင်ဘူး ... တစ်ကမ္ဘာလုံး သူသူငါငါ ငုတ်တုတ်မေ့နေကြတာဆိုတော့ နွားနှစ်မှာလည်း နွားလို ဆက်ရုန်းကြဦးပေါ့။ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကြောင်းချည်းပါပဲ။ ဒီအကြောင်းဆက်ရေးရင် ငြီးတွားမှုသံစဉ်တွေ ပါလာတော့မယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး သုံးခါလောက် New Year ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်ရတယ်။ မြန်မာလိုတစ်ခါ၊ အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါ၊ အခု တရုတ်လိုတစ်ခါ။ ဒါတောင် ကရင် နှစ်သစ်ကူး၊ မွန် နှစ်သစ်ကူးတွေ ကျန်သေးတယ် :) ဒီမှာလည်း အဲလို နှစ်သစ်ကူးပွဲတွေ ကျင်းပကြတယ်။ အဲဒီပွဲတွေကိုတော့ မရောက်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ ရှိစေတော့။
အားလုံးပဲ ... Happy Chinese New Year !!!
စကားမစပ် ... မြန်မာပြည် (ရန်ကုန်) က Chinese New Year ကျင်းပတဲ့ ပုံတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါကြီး ကိုရဲလွင်ဦး ဆီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲ ကိုရဲလွင်ဦး :)